onlineakhabar.com: यस्तो भाँडामा रहन बाध्य छिन् यी १९ बर्षीय युवती, आखिर किन? (हेर्नुहोस् भिडियो)
Amazing Girl, Amazing News, Amazing Video, International, Main News, Video, Viral Video » यस्तो भाँडामा रहन बाध्य छिन् यी १९ बर्षीय युवती, आखिर किन? (हेर्नुहोस् भिडियो)
यस्तो भाँडामा रहन बाध्य छिन् यी १९ बर्षीय युवती, आखिर किन? (हेर्नुहोस् भिडियो)
भनिन्छ भगवानको अगाडी कसैको केही लाग्दैन, भगवानले कहिले के गर्दछन् कसैलाई थाहा हुँदैन । नाइजेरियामा बस्ने १९ बर्षीय युवतिको साथमा पनि यस्तै भएको छ । उनि एउटा प्लास्टिकको भाँडामा बस्न बाध्य छिन् । यि युवतिको नाम रहमा हरुना हो र उनि प्लास्टिको भाँडामा बस्ने गर्दछिन् त्यसैमा खान्छिन्, त्यसैमा खेल्छिन् र त्यसैमा घुम्न जान्छिन् ।
जब रहमाको जन्म भयो तब उनको स्वास्थ्य अन्य बच्चाहरुको जस्तै थियो । जब उनि ६ महिनाकी भइन् त्यसपछि अनौठो किसिमको रोगले छोयो उनलाई । एउटा यस्तो रोग जसलाई रहस्य नै भन्दा फरक पर्दैन । यो रोगको कारण उनको हात र खुट्टा सानो हुँदै गयो । आज रहमा १९ बर्षकी भइन् तर यिनको हात र खुट्टा छैनन । अब यिनी एउटा प्लास्टिकको टबमा रहन्छिन् । टबलाई उठाएर रहमालाई यता उता लैजाने गरिन्छ ।
उनको आमा फादीका अनुसार जब उनले बस्न शुरु गरिन् त्यहि समय बाट उनमा समस्याहरु आउन थाल्यो । उनले हिड्न पनि सिक्न पाइनन् । यो रोगको शुरुवात ज्वरोबाट भएको थियो । त्यसपछि रहमाको पेट दुख्न थाल्यो र बिस्तारै बिस्तारै यो दुखाई हात खुट्टा हुँदै पुरै शरिरमा फैलदै गयो ।
रहमाको यस्तो अवस्थाका कारण उनको परिवारलाई ठूलो समस्याको सामना गर्न परिरहेको छ । रहमा आफै कतै जाने आउने गर्न सक्तिनन् । उनलाई कसैको मद्दत लिनु पर्दछ । रहमाका भाई फहाद भन्छन्, "म कसैलाई उनको मद्दत गरेको देख्दछु त मलाई निकै खुसी लाग्छ ।" त्यस्तै रहमाका पिता भन्छन्, मैले १५ बर्ष देखी धेरै डाक्टरहरुसँग उपचारको लागि गएको छु । म किसान हो जे जति कमाउँछु रहमाको उपचारको बिल तिर्दा ठिक्क भएको छ । सायद भगवानलाई मात्र थाहा होला कि उनको उपचारमा अहिले सम्म कति पैसा लाग्यो होला।
रहमाको आमा बाबुले धेरै डाक्टरहरुसँग उनको उपचारको कोशिस गरे तर कुनै परिणाम आउन सकेन । डाक्टर स्वयं रहमाको रोग देखेर चकित छन् । रहमा भने यस्तो अवस्थामा पनि भगवानलाई धन्यवाद गर्दछिन् । भन्छिन्, म भगवानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज म जे बोल्छु, जे काम गर्न सक्छु सबै उनैको कारण हो ।
Tags : Amazing Girl Amazing News Amazing Video International Main News Video Viral Video